सामाजिक सञ्जालका समाचार कत्तिको विश्वसनीय लाग्छन् ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः श्रावण १०, २०७४ - साप्ताहिक
सामाजिक सञ्जालका समाचार कत्तिको विश्वसनीय लाग्छन् ?
शतप्रतिशत विश्वास त गर्दिनँ र गरिहाल्नु पनि हुँदैन । सरकारी अनुमति लिएका अनलाइन तथा अनुमोदित स्रोतबाट आएका खबरहरूमा भने सत्यता हुन्छ ।
- रोशन प्रसाईं, विज्ञापन व्यवसायी
अनलाइन धेरै भएका कारण कतिपय समाचार झूटा र कपोलकल्पित पनि हुन्छन् । त्यसैले बिग मिडियाबाट आउने समाचारमा मात्र विश्वास गरिन्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाको प्रभाव अत्यधिक छ । पूरै विश्वास गर्न नसके पनि उनीहरूको प्रस्तुतिका कारण हेर्न–पढ्न मन लागिहाल्छ । यसरी अनलाइन र सोसल मिडियाको नकारात्मक प्रयोग गर्नेहरूको बिगबिगी हुँदा सत्य–असत्य छुट्टयाउन गाह्रो छ ।
- शान थापा, डिजाइनर
आफ्नो साइटको भ्युज बढाउन अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा कतिपय उडन्ते समाचार पनि हालिन्छ । अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार सत्य हो कि होइन भनेर विश्वास गर्न अन्य माध्यमबाट भेरिफाई गर्नैपर्छ, यद्यपि अहिले छिटो समाचार प्राप्त हुने स्रोत अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल नै भएका छन् ।
सबै अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल समाचारको स्रोत हुनसक्छन्, तर त्यसको विश्वसनीयताका लागि विश्वसनीय अनलाइनहरूमा गएर क्रसचेक गरिन्छ । यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा आउने सबै समाचारमा शतप्रतिशत विश्वास गरिँदैन भन्ने नै हो ।
कहाँ लाग्नु ? लाग्दैन नि ।
- गौरव पहारी, अभिनेता
अचेल त विश्वास लाग्छ । हरेक समाचार वा घटना थाहा पाउने पहिलो स्रोत नै अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल भएका छन् ।
- उषा खड्गी, मिस नेपाल– २०००
सन्दर्भ ठीक हुन्छ, तथ्य प्राय: हावादारी लाग्छन् ।
- सुरक्षा पन्त, अभिनेत्री
हालसालैका धेरै समाचार हेर्दा विश्वास लाग्न छाडेको छ । उल्टोपाल्टो पारिएका, बढाइचढाइ गरिएका समाचारहरू हालिएको पाइन्छ, तर केही विश्वसनीय पनि छन्, जसले सही जानकारी दिएका छन् ।
- मोहित मुनाल, संगीतकर्मी
धैरैजसो विश्वसनीय नै हुन्छन्, तर उत्ताउला, उरन्ठेउला शिर्षक भएका समाचारचाहिँ फेक नै लाग्छन् ।
- नीराजन प्रधान, अभिनेता
ठीकै लाग्छन् ।
- लक्ष्मी बस्नेत, अभिनेत्री
जमाना भाइरलको छ । सामाजिक सञ्जालमा जे लेखे पनि, जे राखे पनि शरीरमा भाइरस फैलिए जस्तो गरेर समाचार फैलिन्छ । भाइरसले शरीरलाई जसरी असर गर्छ, भाइरल भएर फैलिएको समाचारले पनि समाजलाई त्यसरी नै असर गर्छ । त्यही भएर विश्वास गर्नुभन्दा अघि भाइरललाई निको पार्ने औषधि खोज्छु म त । पत्रपत्रिका वा अन्य स्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र विश्वास गरिन्छ सामाजिक सञ्जालका कुराको ।
- विजय अधिकारी, चलचित्र लेखक
केहीको लाग्छ, केहीको लाग्दैन ।
कतिपय विश्वास लायक समाचार पनि हुन्छन्, तर धेरै गलत उद्देश्यले फैलाइएका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसैले कुनै गलत खबर फैलायो भने पनि सबै त्यसकै पछि दौडिन्छन् । आफ्नो कान नै नछामी कागको पछाडि दौडिए जस्तो ।
खासमा अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार, समाचारका लागि लेखिएका हुँदैनन् । गुगलबाट कमाउ धन्दाका लागि कपिपेस्ट गरी जथाभावी हेड लाइन राखिएको हुन्छ । त्यस्तालाई कसरी विश्वास गर्नु ? अपुष्ट समाचारको पोको नै हो अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल तसर्थ मलाइ त १० प्रतिशत जति मात्र विश्वास लाग्छ ।
- जनकदीप पराजुली, निर्देशक
समाचारको बिउमा विश्वास लाग्छ, तर टुसाहरूचाहिँ ९० प्रतिशत नै हावादारी लाग्छन् ।
५०/५० प्रतिशत । शतप्रतिशत विश्वास गर्न पत्रिका नै हेर्छु ।
मेरो व्यक्तिगत विचारमा समाचारलाई सकारात्मक ढंगबाट लिइयो भने त्यो राम्रै लाग्नसक्छ, नकारात्मक ढंगबाट लिइयो भने त्यो गलत नै हुन्छ ।
- सुनील थापा, अभिनेता
ठूला मिडियाको समाचारमा मात्र विश्वास लाग्छ ।
- राम पाण्डे, टेलिभिजनकर्मी
सबै झूटा हुन्छन् । तिनमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता हुँदैन ।
- सुनिल रावल, निर्माता
केही विश्वास त लाग्छ, नहेरे चित्तै बुझ्दैन ।
- किशोर घिमिरे, गीतकार